5 युरोप मा ट्रेन द्वारा यात्रा लागि सुझावहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5युरोप मा ट्रेन द्वारा यात्रा लागि सुझावहरू
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 18/02/2020)
हेर्न र अनुभव यति अधिक एक युरोपेली रेल साहसिक मा embarking द्वारा. युरोप मा रेल द्वारा यात्रा लागि quintessential विधि छ युरोप घुम्दै र यो कुनै रहस्य किन छ. को रेल नेटवर्क छ यात्री जित्न सक्छौं त अति विकसित एक महाकाव्य यात्रा मा धेरै देशहरूमा र संस्कृतिका. यात्रा को कुनै पनि फारम संग रूपमा, यसलाई तपाईँ सम्भावित सजिलो र सबै भन्दा रमाइलो यात्रा छ भनेर सुनिश्चित गर्न आफैलाई तयार गर्न राम्रो छ. यहाँ हाम्रो हो5युरोप मा रेल द्वारा यात्रा लागि सुझावहरू.
यदि तपाईं माथि यात्रा 14 दिन – अनुसन्धान विभिन्न रेल देख्नासाथ
तपाईं हेर्न योजना छ भने धेरै देशहरूमा युरोप मा रेल द्वारा यात्रा गर्दा यो एक Interrail पास लगानी विचार बुद्धिमानी हुन सक्छ, वा के गैर यूएस नागरिक कल Eurail. एक Interrail पास गर्नेछ आफ्नो रेल यात्रा सजिलो. तथापि, तपाईं एक मा छन् भने तंग बजेट, व्यक्तिगत टिकट सस्ता बाहिर काम गर्न सक्छन् (तपाईं मुख्य रूप को पूर्व यात्रा गर्दै विशेष गरी यदि जर्मनी). आफ्नो बजेट विचार र तपाईं आफ्नो रेल पास बुक अघि केहि अनुसन्धान. Our website saveatrain.com युरोप भरि आफ्नो यात्रा योजना बनाउन सहयोग गर्ने सुरु गर्न सही ठाउँमा छ.
आफ्नो सिट आरक्षित गर्ने प्रयास
रेल टिकट र सीट आरक्षण दुई फरक कुरा हुन्. एक टिकट तपाईं एक रेल बोर्ड गर्न अनुमति दिन्छ, र आरक्षण तपाईं एक विशिष्ट रेल मा एक सीट ग्यारेन्टी. पहिले तपाईंको यात्रा तपाईं आफ्नो रेल आवश्यक कि बुझ्न बनाउन, सुझाव, वा सीट आरक्षण स्वीकार गर्दैन.
यदि सम्भव छ भने, आफ्नो सीट आरक्षित गर्न प्रयास, विशेष गरी तपाईं जस्तै Uber लोकप्रिय देशहरूमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने फ्रान्स, इटाली वा स्पेन. युरोप मा रेल द्वारा सबैभन्दा परिभ्रमण लागि, तपाईं आफ्नो सीट आरक्षित गर्न आवश्यक छैन, तथापि, रेल बोर्डिङ र लागि आशा सबै भन्दा राम्रो एक राम्रो विचार छ. तपाईं आफ्नो सीट मध्य बाहिर प्राप्त गर्न भन्नुभयो सकिएन यात्रा अरू कसैले यसलाई बुक छ भने. आफ्नो स्थान को आरक्षण को द्वारा, के तपाईं एउटा डिब्बामा वा विन्डो सीट चाहन्छु कि चयन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं फिर्ता बस्न र आनन्द उठाउन सक्छौं रेल सवारी थाह पाउँदा तपाईं सार्न अवरोध गरिनेछ.
आफ्नो सम्पत्तिमाथि सुरक्षित राख्न
युरोप मा रेल द्वारा यात्रा को रूपमा जानिन्छ यात्रा गर्न safest तरिका. तथापि, यो pickpocketers लागि आँखा बाहिर राख्न महत्त्वपूर्ण छ, विशेष कि प्रमुख शहर मा रोक्न रेल संग. आफ्नो सामान unguarded नछोड रेल वा मा स्टेशन. मा रात रेल, तपाईं सुत्न अभिप्राय यदि, एउटा सानो साइकल लक दराज गर्न सामान सुरक्षित गर्न निश्चित. मन को शान्ति छ, आफ्नो पासपोर्ट राख्न आफ्नो लुगा अन्तर्गत कमर प्याक लगाउने, फोन र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कागजातहरू कुनै पनि सम्भावित चोर देखि सुरक्षित.
कम बढि छ – युरोप मा रेल द्वारा यात्रा लागि सुझावहरू
बाट जाँदै देश देश वा शहर शहर रमाइलो र रोमाञ्चक यात्रा हो. तथापि, तपाईं एक भारी लोड बोकेको छन् यदि यात्रा लत्तो बन्न सक्छ. अत्यावाश्यकहरु प्याक र पछि आवश्यक छैन भनेर कुनै पनि आइटम वा उत्पादनहरु छोड्न.
तपाईं यात्रा गर्दै रेल आधारमा, युरोप मा रेल द्वारा यात्रा गर्दा त्यहाँ सीट रैक र समतल भन्दा मा सीमित भण्डारण ठाउँ हुन सक्छ. सट्टामा ठूलो र भारी सुटकेश पूरा, एक गुणस्तर हल्का झोला आफ्नो लोड हल्का गर्न अर्को तरिका हो.
रेल द्वारा यात्रा युरोप प्रदान गर्दछ मा सनसनीपूर्ण दृश्य; तथापि, यो तपाईं भन्दा थप यात्रामा embarking छन्, विशेष गरी यदि समय पास गर्न मद्दत गर्न केही प्रमुख वस्तुहरू ल्याउन एक राम्रो विचार छ2घण्टा. पुस्तक पढ्ने, हेर्न एक चलचित्र तपाईंको ट्याब्लेटमा, आफ्नो यात्रा पत्रिका मा लेख्न वा अर्को यात्री संग कुराकानी हडताल र तपाईंलाई थाहा अघि तपाईं आफ्नो अर्को गन्तव्य मा हुनेछ.
Most trains have eitherarestaurant, कि स्यान्डविच बिक्री गरेर आएको क्याफे वाहनो वा खाजा Carts, शीतल पेय र थप. तर तपाईं एक तंग परिभ्रमण बजेट छन् वा यदि विशिष्ट छ आहार आवश्यकताहरू, यसलाई आफ्नो यात्रा सँग केही नाश्ता ल्याउन बुद्धिमानी हुन्छ.
युरोप मा रेल द्वारा परिभ्रमण सोच? जाऊ त्यहाँ अनलाइन एक ट्रेन सुरक्षित हाम्रा सबै विशेष भाडा जाँच र आफ्नो अर्को साहसिक योजना सुरु गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, र तपाईं / ES वा / डे र अधिक भाषा गर्न / RU परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
रेल सुझावहरू रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह traveltips
सबैभन्दा प्रसिद्ध र ऐतिहासिक ट्रेन मार्गहरू के हुन्
ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप